प्राविधिक पार्श्व फोर्कलिफ्टको साथ भारी शुल्क क्यान्टिलिभर र्याकिंग प्रणालीले लामो सामग्री र अनियमित आकारको सामग्रीको भण्डारण समाधान गर्न सक्दछ। उच्च स्तम्भ १० मिटरमा पुग्न सक्दछ, क्यान्टिलिभर आर्म लम्बाई १.० - १.२ मीटर छ, र लोड गर्ने क्षमता १ टनसम्म पुग्न सक्छ।
भारी शुल्क क्यान्टिलिभर र्याकिंग प्रणाली इनडोर र आउटडोरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो तातो डुबकी आउटडोरको सतह उपचार गर्न जस्ता प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो स्तम्भको शीर्षमा छत पनि स्थापना गर्न सकिन्छ, त्यसपछि हावा, वर्षा र घामको प्रतिरोध गर्न सकिन्छ।
क्यान्टिलिभर र्याकिंगले विशिष्ट अपराइट र उच्च-शक्ति हातहरू अपनाउँछ, लामो आकारको and गोलाकार, प्लेटहरू र अनियमित भारी सामग्रीहरू भण्डारण गर्न उपयुक्त छ। भार बोक्ने क्षमता अनुसार, तिनीहरू प्रकाश, मध्यम र भारी शैलीहरूमा विभाजित छन्।
हतियारहरूमा स्टील वा काठको बोर्ड बोर्ड बढाइएपछि, यो विशेष गरी सानो स्थान र तल्लो उचाइको गोदामको लागि उपयुक्त छ, उच्च स्थान प्रयोगको साथ। यो सामानको भण्डारणको सजिलो दृश्यको साथ सामान लोड गर्न र अनलोड गर्न धेरै सुविधाजनक र छिटो छ।
Load लोड क्षमताको विस्तृत दायरा दुबै मानक र सिस्मिक अनुप्रयोगहरू अनुरूप
◆ केन्द्र स्तम्भ डिजाइन असीमित क्षैतिज स्पेस सिर्जना गर्दछ
Ul पूर्ण अनुकूलन योग्य
हतियारहरू सजिलै माथि र स्तम्भमा समायोजित गर्न सकिन्छ र २२० ~ १500०० केजी (१०० ~ ~~०० एलबीएस) को क्षमताका विभिन्न प्रकारका साथ लम्बाइमा उपलब्ध छन्।
क्यान्टिलिभर र्याकि ofको पाख या त एकल पक्ष वा डबल साइड हुन सक्छ।
हामी HEGERLS क्यान्टिलिभर र्याकि 20 २०२१ उच्च गुणवत्ता १ 15०० किलोग्राम ट्यूब वा MDF भण्डारणको लागि पावर कोटिंगको साथ प्रदान गर्दछौं। हामी २ 25 बर्षको अनुभवको लागि गोदाम भण्डारण क्षेत्रमा आफैलाई समर्पित गर्दछौं। हामी चीनमा तपाईको दीर्घकालीन साझेदार बन्ने आशा गरिरहेका छौं।
HEGERLS क्यान्टिलिभर 2021 उच्च गुणवत्ताको र्याकिंग ट्यूब वा MDF भण्डारणको लागि पावर कोटिंगको साथ रैकिंग गर्दै
१. क्यान्टिलिभर र्याकको उत्पादन परिचय
क्यान्टिलिभर र्याकिंगले विशिष्ट अपराइट र उच्च-शक्ति हातहरू अपनाउँछ, लामो आकारको and गोलाकार, प्लेटहरू र अनियमित भारी सामग्रीहरू भण्डारण गर्न उपयुक्त छ। लोड बोक्ने क्षमता अनुसार, तिनीहरू प्रकाश, मध्यम र भारी शैलीहरूमा विभाजित छन्।
1.१. यो MDF र ट्यूब भण्डारणको लागि उपयुक्त छ। प्रत्येक पाखुराको लोडिंग १००० किलोग्रामसम्म पुग्न सक्दछ
2.२ पोष्टको उचाई १० मिटरसम्म पुग्न सक्छ
Can. क्यान्टिलिभर र्याकको उत्पादन विवरण
1.१ रंग अनुकूलन गर्न सकिन्छ। हामीसँग निलो र सुन्तला रंग छ। यो पनि अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
2.२ प्वालहरू लेजर काटेर गठन गरिन्छ। यो ठीक छ
अघिल्लो: HECERLS ड्राइभ र्याकिंग प्रणालीमा
अर्को: HEGERLS रेडियो शटल र्याकि।
क्यान्टिलिवर आर्म र्याक
धातु क्यान्टिलीभर रैक